Email Template ee Dalbashada
Posted by Tranquillus | Nov 25, 2018 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Waxaa jira dhacdooyin badan marka shirkadaada ay tahay inay soo dirto warqad cabasho ah, ha ahaato macnaha ereyada aan la bixin, magdhow ama magdhawga alaab aan ku habboonayn alaab-qeybiye, iwm. . Maqaalkani, waxaan ku siinnaa labada shey ee emailka ugu badan ee cabashooyinka.
Email template si aad u codsato bixinta qaansheegta
Cabashada qaansheegyada aan la bixin ayaa ah nooca ugu badan ee cabashada ganacsiyada dhexdooda. Noocan ahemail waa in uu ahaado mid aad u saxan oo la macneeyay si ku filan si uu isla markiiba u fahmo waxa ay ku saabsan tahay - tani waxay ka fogaan doontaa gadaal iyo gadaal, gaar ahaan kuwa is dhexgala ee isku dayaya inay dib u dhigaan taariikhda lacag bixinta!
Haddii emailka codsigu yahay xusuusinta ugu horreysa ee la diro, waa ogeysiis rasmi ah. Sidaa darteed waa qeyb ka mid ah qaab-dhismeed sharci oo waa in si fiican loo daryeelaa haddii kiisku sii socdo maxaa yeelay waxay u adeegi kartaa caddayn ahaan.
Halkan waxaa ku yaal shey email ah oo lagu dalbanayo qaansheeg aan la bixin:
Mawduuca: Ogeysiiska rasmiga ah ee qaan-sheegashada waqtigeedii la soo dhaafay
Marka laga reebo qalad ama wax laga tirtiro qaybteena, ma aanan helin lacag bixinta qaansheegta taariikhda [taariikhda], xaddiga [qadarka lacageed], oo dhacay wakhtigii [taariikhda ugu dambeysay].
Waxaan si naxariis leh ku weydiineynaa inaad bixiso qaansheegtan sida ugu dhakhsaha badan, iyo sidoo kale lacag bixinta daahsoon. Fadlan waxaad ka heli kartaa qaansheegta kuxiran ee su'aasha ah, oo lagu daray khidmadaha dambe ee lagu xisaabiyey si waafaqsan Xeerka L.441-6 2008 776-4 August 2008.
Inta aad sugeysid jadwalkaaga, waxaan ku jirnaa kharashkaaga wixii su'aal ah oo ku saabsan qaansheegtan.
Oggolow, Sir / Madam, muujinta salaanteenna si daacad ah,
Email template si aad u dalbato magdhow ama lacag celin
Waa wax iska caadi ah in meheraddu ay dalbato magdhow ama magdhow, ha noqoto alaab-qeybiyeheeda ama lammaane dibadeed. Sababahu way badan yihiin: dib udhaca ku yimaadda safarka socdaalka shaqo, wax soo saar aan is beddel lahayn ama mid xaalad xun ku yimid, masiibo ama waxyeelo kale ayaa qiil u samayn kara qorista emaylka noocaas ah.
READ Template warqad ah si aad u codsato horumarin ama deebaaji
Wax kasta oo ka yimaada dhibaatada, qaabka emailka codsiga had iyo jeer waa isku mid. Ku billow adigoo soo bandhigaya dhibaatada iyo nooca dhibaatada, ka hor inta aadan buuxin codsigaaga. Inaad xor u noqoto inaad sheegto qaanuun sharci ah si aad u taageerto codsigaaga.
Waxaan soo jeedineynaa qaabka emailka ah ee cabashada lagu soo gudbiyo alaab-qeybiyaha haddii ay jirto xaalad aan ku habboonayn sheyga.
Mawduuca: Codsiga lacag celinta ee alaabada aan buuxin
Iyadoo qayb ka ah heshiiska [magaca ama nambarka qandaraaska] ee isku xiraya shirkaddaada, waxaanu amar ku bixinnay [tirada alaabta + nooca ah] sida [taariikhda], qadarka guud ee [amarka dalbashada].
Waxaan soo saarnay badeecada [taariikhda rasiidka]. Si kastaba ha noqotee, ma waafaqsantahay sharaxaadda liiskaaga. Runtii, cabbirada ku qoran liiskaaga waa [cabbir], halka tallaabooyinka alaabta la helay ay [cabbir]. Fadlan waxaad ka heli kartaa sawirka ku lifaaqan adigoo hubinaya in aadan ku habooneyn badeecadda la soo gudbiyey.
Sida ku cad qodobka 211-4 ee Xeerka Adeegatada, isagoo sheegaya in lagaa rabo in aad soo saarto sheyga si waafaqsan qandaraaska iibka, fadlan si nadiif ah u soo celi badeecadan ilaa [lacagta].
Aragtidaada jawaabta, fadlan aqbal, Madam / Sir, muujinta dareenka aadka u caan ah.
Email Template ee Dalbashada Agoosto 27th, 2020Tranquillus
horeSida loo nadiifiyo shabakadahaaga bulshada daqiiqado leh Mypermissions?
socdaEmail template ah codsi fasax ah
Samee qorshe qoraal oo wanaagsan shaqada